Io zazavavy io amin’ny fahaketrahana miteny, izay zara raha misy lehilahy HuffPost Alemaina
Na dia olona an-tapitrisany manerana izao tontolo izao ny mijaly, ny hakiviana androany mandra-fady ny lohahevitra. Tsy misy olona tia ny miaiky fa izy dia voan’ny aretin-tsaina. Lehibe loatra ny tahotra, ny fihetseham-po-nitranga.
Indrindra indrindra, eo amin’izao tontolo izao ny asa, fa ny Olana, satria Kivy be sahiran-tsaina matetika amin’ny tsy fahafahana miasa. Ny sahy kokoa ny olona, izay rehetra nilaza ny marina, miresaka momba ny zavatra izay ka dia nampangina. Ny taona nahazo Miles dia lasa aza ny dingana lavidavitra kokoa. Efa misy Tombokavatsa ianao dia farany, ny fifanakalozan-kevitra dia manomboka. Teo amin’ny tongotra ankavia, ny teny dia izao toa ahy mba ho tsara vakiana. Izany no teny izay nolazainy ny kivy ny vahoaka hatrany hatrany, na raha toa ianao ka raha ny marina ho lainga. Noho izany, Bekas Tattoo manana dikany faharoa. Satria avy amin’ny fomba fijery ny tenin ‘mamonjy afa-ma’ (mba vakio). Nahazo nanazava hoe: ‘Raha ny hafa kosa mahita izany, dia tsy misy, fa avy ny fomba fijery, dia ny mamaky. Ho ahy, izany dia midika fa ny hafa kosa mahita izany ny Olona, dia toa ny tsara ho any, saingy ny tena marina dia tsy izy no tsara. Izany dia mampahatsiahy ahy fa ny olona izay toa tsy mba ho sambatra, toy ny tsara amin’ny ady amin’ny tenany dia afaka ho. ‘Ny taona nivoaka tao amin’ny vanin-taona mafana, ny sarin’ ny Tombokavatsa avy amin’ny lafiny roa amin’ny Facebook ary nanoratra hoe: (ry neny, ry dada, aza hamono ahy noho izany fanapahan-kevitra izany. Tiako ianao aoka aho farany.) Androany aho dia te hiresaka momba ny zavatra izay vitsy ihany ny tsy mahalala. Vonona aho mba hanombohan-dresaka momba ny aretin-tsaina. Tamin’ny taona lasa aho dia voan’ny Fahakiviana. Ary amim-pahatsorana, mino aho fa izany no tena kosa mialoha ny Olana, saingy mihevitra aho fa nahazo ny ratsy sy ny ratsy mandra-na inona na inona asa. Androany aho dia manana izany Tatoazy. Aho dia nanana fihetseham-po fa ny tongony no toerana tsara indrindra ho an’ny ny dikan’ny ao ambadika. Raha ny hafa kosa mahita izany, dia tsy misy, fa avy ny fomba fijery, dia ny mamaky. Ho ahy, izany dia midika fa ny hafa kosa mahita izany ny Olona, dia toa ny tsara ho any, fa ao ny zava-misy dia, tsy tsara. Izany dia mampahatsiahy ahy fa ny olona izay miseho ho sambatra, mety ho toy ny tsara amin’ny ady amin’ny tenanao. Ketraka ny enti-mody tsy vita, satria fotsiny aho dia nanana fihetseham-po mba ho afaka hanao izany. Ketraka ny alina izay mitomany aho satria tsapako ka sahiran-tsaina, na dia ny zava-drehetra dia mba. Kivy dia mila ho foana hanelingelina (amin’ny alalan’ny haino aman-Jery, lalao video, sarimihetsika, ary ao amin’ny TELE na dia be ny asa), satria tsy afaka ny hatoky ny eritreritro ho mihoatra ny telo minitra. Ketraka, ny ranomaso izay tsy nanao izany aho, satria tsy fantatro hoe nahoana aho no mahatsapa ka tsy misy ilana azy, rehefa fantatro fa tokony tena ho sambatra. Dia tena sarotra ny miresaka an-karihary ny momba azy, satria dia toa ny ahy tena sarotra ny hahatsapa marefo. saingy izany no zava-dehibe mba hiresaka momba izany. Aretin-tsaina dia ny zavatra Lehibe, fa ny tena henatra eo amin’ny Fiaraha-monina. Ny ara-batana, ara-pahasalamana dia tena zava-dehibe ho antsika, saingy isika fikarakarana kely momba ny toe-tsaina. Ary izany dia tena vita tanteraka. Ny aretin-tsaina dia tsy fanapahan-kevitra, ary mety hisy fiantraikany eo na iza na iza amin’ny fotoana iray eo amin’ny fiainana. Izany dia tsy manan-danja ny olana, nahoana isika hiresaka momba izany. Izany no antony nahazo izany Tatoazy. Izany no fomba tsara hanombohana ny resaka. Izany hery ahy mba hiresaka momba ny ady, ary nahoana no zava-dehibe mba hampitombo ny fahafantarana fa io aretina io. Te ho gaga ny fomba maro ny olona no TSY mahafantatra izay miady amin’ny fahakiviana, Fanahiana, na ny aretin-tsaina. Izaho fotsiny dia mety ho olona iray, nefa ny iray ihany no afaka hamonjy ny hafa. ary ny rehetra dia afaka mangataka. Angamba izany no antony toy izany aho amin’ny psikolojia liana. Te hanampy ny olona izay mahatsapa fa ny fomba, araka ny efa vita sy mbola hatao — satria izany dia ny helo. Ary enga anie ianao na iza na iza. ‘Mino aho fa ny tena mampalahelo ny olona foana hanome ny ezaka lehibe indrindra ny mba hahatonga ny olona ho faly, satria izy ireo no mahalala ny zavatra toy izany ny mahatsapa tena tsy misy ilana azy sy tsy te na iza na iza no mahatsapa toy izany.
MISAOTRA anareo rehetra izay efa nanampy ahy tamin’ny ady izany. Raha tsy nisy anao aho dia tsy ho aiza aho amin’izao fotoana izao.
Ny olona no nizara ny Lahatsoratra tao amin’ny Facebook izay mampiseho fomba maro ny olona te kokoa ny adihevitra misokatra momba ny foto-kevitra. Isika dia tokony nahazo ny herim-po misaotra. Ny Huffington Post no adihevitra sehatra ho an’ny rehetra ny fomba fijery. Raha ny fifanakalozan-kevitra ara-politika na ara-tsosialy Ny tena lahatsoratra sy ny Bilaogy mba Handray lahatsoratra isan’andro amin’ny alalan’ny mailaka. Ny Gazety dia mety ahitana manokana Votoaty sy ny dokam-barotra.
← Fa ny voalohany ao amin'ny Swingers club